20 mitsara yakakurumbira yaErnest Hemingway | Zvazvino Zvinyorwa
Pazuva rakaita nhasi 21 yeJuly, kunyanya mugore ra1899, Ernest Hemingway akazvarwa, American rakapemberera munyori uye Mubayiro weNobel muMabhuku muna 1954. Neichi chikonzero uye uye nekuti zvinogara zvakanaka kuyeuka mazwi ehungwaru kubva kuvanyori vakuru, isu takaunganidza Mitsara 20 inozivikanwa naErnest Hemingway nhasi.
Tinovimba unofara nazvo!
Mazwi akachenjera pane zvese uye hapana
Nzira yakanakisa yekuziva kana uchigona kuvimba nemumwe munhu ndeyekuvimba naye.
Sei vanhu vakuru vachikurumidza kumuka? Kuti uve nezuva rakareba here? ».
"Murume ane hunhu anogona kukundwa, asi haana kumboparadzwa."
"Vanhu vane utsinye vanogara vachinzwa."
"Zvinotora makore maviri kudzidza kutaura uye makumi matanhatu kudzidza kunyarara."
Ino haisi nguva yekufunga nezve izvo zvausina. Funga nezve izvo iwe zvaunogona kuita nezviripo.
"Chakavanzika chehungwaru, simba uye ruzivo kuzvininipisa."
"Mukurwa kwazvino unofa sembwa uye pasina chikonzero."
"Usambofa wakafunga kuti hondo, kunyangwe ichidikanwa sei kana kupembedzwa ingaite kunge isisiri mhosva."
"Edza kunzwisisa, hausi hunhu hwenhamo."
"Talent ndomararamire aunoita."
Unondida, asi hausati wazviziva.
Usambofa wakanyora nezve nzvimbo kusvika iwe wave kure nayo.
"Kusurukirwa kwerufu kunouya kumagumo ezuva rega rega rehupenyu iro munhu raakatambisa."
"Maziso akaona Auschwitz naHiroshima haangatongoona Mwari."
"Mazuva ese izuva idzva." Zvirinani kuve nerombo rakanaka. Asi ini ndinofarira kuve chaizvo. Zvino kana rombo rasvika, ini ndichave ndakagadzirira.
"Vanhu vakanaka, kana iwe ukafunga nezvazvo zvishoma, vagara vari vanhu vanofara."
"Mufaro ndicho chinhu chinoshamisa chandinoziva nezvevanhu vakangwara."
Usambofa wakavhiringidza kufamba nekuita.
Nyika inzvimbo yakanaka yakakodzera kurwira.
(Uye ndakashinga zvandinofarira zvishanu… Ndezvipi zvako?).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » 20 akakurumbira makotesheni kubva kuna Ernest Hemingway
Maziso akafungisisa Auschwitz naHiroshima haazombokwanisa kufunga nezvaMwari ”.
ABHERI NÉSTOR LENAIN akadaro
MASHOKO AKANAKA, UYE ZVINONYANYA KUZIVISA KUTI VANOMUKA KUSVIRA MUUPENYU HUPENYU.-
Imwe nyaya yakakosha: sezvo zvave zvisingaite zvachose kuti ndisangane nevanhu veAMAZON, avo panzvimbo ino vanosimudzira mabhuku avo, ndinokumbira kuti mamaneja ekutaurirana aziviswe kuti ini handizokwanise kutaura kunze kwekunge vaita, pese pese masystem avo achiramba email yangu nefoni data. Atte.-
Pindura kuna ABEL NÉSTOR LENAIN